Njalo inkampani ngokuhamba evamile yebhizinisi kuyakuba izindleko. Lezi zihlanganisa izindleko ngqo kwisabelo umbono othile lapho ezahlukene imikhiqizo kungenzeka.
Ongaqondile (phezulu) izindleko ezihambisana imisebenzi ewumgogodla kwanoma iyiphi inhlangano, kodwa engahileli wakhe ngqo. Basuke akufakiwe izindleko zokwakha kanye nabasebenzi. izindleko ezihambisana nokusebenza kanye nokugcinwa kwezimali ezimpahleni ezingasuki phansi, inhlangano kanye nokuphathwa zokukhiqiza, ukugcinwa kwayo, zohambo, ukuqeqeshwa professional yabasebenzi futhi ukulahlekelwa non-elikhiqizayo (spoilage of izinto zokusetshenziswa, ukulahlekelwa Ukuphumula).
izindleko engaqondile ihlanganisa izindleko zokushaya ucingo kanye nezokuxhumana, internet, irenti laba nendawo yamahhovisi. Ziyakwazi eziyinkimbinkimbi futhi izindleko, lapho kubalwa izindleko egcwele imikhiqizo ethile zabiwa kunemibandela ezinhlotsheni ezithile nemikhiqizo. Ukubalwa nokwabiwa izindleko isisekelo ukwamukelwa kwezinqumo ezithile ukusebenza, ukusungula izintengo imikhiqizo, ukubala inzuzo zonke izinhlobo zemikhiqizo.
Ezinye izindleko baguqulelwa, abanye sizinzile isikhathi esithile, kanye ukwehla ivolumu kohlobo oluthile imikhiqizo kungukuthi encishisiwe.
ebhizinisini ngalinye ukuthuthukisa inqubo ukusatshalaliswa lolu hlobo ukusetshenziswa kwezimali. Ukuze kufakwe izindleko imikhiqizo ethile eqondile izindleko, asathuthuka lonke uhlelo ukuhambisana. Ukuze ukusatshalaliswa phezulu (ngokungaqondile) izindleko yokuthuthukisa ukulinganisela efanele, ngokuthi ibhajethi. Baloba zonke izindleko ezihambisana ukukhiqizwa izinhlobo ezihlukahlukene eziningi ezidayiswayo. Lezi izilinganiso ezakha ngokuya izihloko kwezomnotho kanye kuboshelwe izinkathi ezahlukene.
izindleko ngesikhathi sibalo Kubiza kohlobo oluthile imikhiqizo ekhiqizwa azifaka kuwo by ezilinganiselwe okunemibandela ukusatshalaliswa izindleko bamukeleke elisekela ukusatshalaliswa ibhizinisi. Izinkomba ezilandelayo zivame kakhulu abakhethiwe ngabo:
- amaholo eyisisekelo abasebenzi (ngaphandle amabhonasi kanye amabhonasi);
- imithetho (kulinganiselwa) ngesilinganiso imishini kanye nemisebenzi;
- udoti yomuntu-amahora;
- ezikhishwe ivolumu zokukhiqiza;
- ezinye izindleko ngqo.
Isimiso eziyisisekelo indlela Ukukhetha kwesabelo zalezi zindleko ukuthola okungcono umdlalo yi ukusatshalaliswa yabo izindleko langempela ukukhiqizwa isikhundla esithile senhlobo imikhiqizo. Iningi amarhwebo base kuthatha iholo eyisisekelo abasebenzi ezimbonini.
Ngokwe-inqubo esikhona kanye nezinkambiso yomthetho zamanje, inkampani ngayinye ihambisa izindleko zalo engaqondile kwasekuqaleni ezindaweni (izinhlobo) yomsebenzi, kanti eyesibili - emisebenzini ethile, noma izinhlobo okukhiphayo. Ngakho, isabelo okunengqondo zalezi zindleko inquma ukunemba ukubala izindleko zokukhiqiza for line ngalinye ukukhiqizwa futhi zonke izinhlobo imikhiqizo.
Abaphathi accounting ngokuvamile inhlanganisela imiqondo ezifana engaqondile futhi ngezikhathi ezithile (evamile fixed) izindleko. Lezi zigaba izindleko kuyadingeka ukuze umuntu ahlukanise phakathi kwabo ngokucacile. izindleko - kuyinto izinga variable, njengoba njalo kuhlobane ngokuqondile umthamo imikhiqizo. Ngamanye amazwi, yonke inqubo ukukhiqizwa inquma uhlobo imali. Izimali kubo wenziwa bebonke, ukusatshalaliswa ama-akhawunti 25 "izindleko Jikelele". Ekuphetheni inyanga ngayinye kusukela akhawunti inani izindleko engaqondile icala okulandelayo:
- Sch. 20 "ukukhiqizwa Primary";
- Sch. 23 "ukukhiqizwa Asizayo".
Kulabo uhlela ukuvula inkampani yokulungisela abahambayo: izikhathi ezibalulekile futhi yezimfihlo zokuphumelela
David Tsallaev - a showman abanamakhono futhi kuphumelele